शाहरुखका छोरा आर्यनलाई ड्रग्स केसमा पक्रिएको घटना राजनीतिबाट प्रेरित ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
शाहरुखका छोरा आर्यनलाई ड्रग्स केसमा पक्रिएको घटना राजनीतिबाट प्रेरित !
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार ००:००
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानको जमानतको लागि आज अदालतमा सुनुवाई हुदैँछ ।मुम्बई क्रुज पार्टी मामिलामा पक्राउ परेका आर्यनको जमानतको याचिकामाथि बिहिबार मुम्बईकामे किला अदालतमा सुनुवाई हुने छ ।
सोमबार अदालतले उनलाई सात अक्टोबरसम्म हिरासतमा राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । आर्यनसँग अरबाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमेचाको जमानतमा पनि आज सुनुवाई हुनेछ ।
यसैबीच महाराष्ट्र सरकारमा क्याबिनेट मन्त्री नवाब मलिकले यो पूरा घटना नक्कली भएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नवाब मलिकले भने, ‘आर्यन खानलाई फसाउने उद्देश्यसहित यो सबैकुरा गरिएको हो ।
एनसीबीको यो कारवाहीमा बिजेपीको हात छ र यो गिरफ्तारी पूर्ण रुपमा राजनीतिद्वारा प्रेरित छ । पछिल्लो एक महिनादेखि क्राइम रिपोर्टरबीच अर्को निशाना शाहरुख खान हुने भन्ने जानकारी पुर्याइएको थियो ।’
वास्तवमा आर्यन खान जुन दिन पक्राउ परेको थिए त्यस दिन उनको एक व्यक्तिसँगको सेल्फी भाइरल भयो । यो सेल्फी एनसीबीको हिरासतमा रहेका बेला खिचिएको थियो । त्यसपछि एनसीबीमाथि यस्तो प्रश्न तेर्सिन थालेको हो ।
यो घटना मुम्बईमा एक क्रुजमा भइरहेको कथित रेव पार्टीसँग सम्बन्धित छ । एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधानले मुम्बई क्रुज ड्रग्स घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनेछ । प्रधानले भने, ‘हामी यो मामिलामा निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेका छौं ।’यो घटनामा बलिउड र अन्य केही धनाढ्यको पनि संलग्नता रहेको दावी गरीएको छ ।
प्रकाशित मिति: Oct 7, 2021